Yemagariro Midhiya Kushambadzira Kuchawedzera mu2021 seMhando Dzinotarisa Kusangana nevatengi Pamhepo
Havasi vatengi vari kungotenga kakawanda pamhepo, asi ivo vanowanzo kutanga nzendo dzavo dzekutenga pasocial media. Masocial mapuratifomu akaita se Instagram neFacebook zvinhu zvakajairika zvekuwanikwa kwechiratidzo uye izvi zvinotarisirwa kuenderera kusvika muna 2021, iine data nyowani inoratidza kuti mar ...
Zvisingaperi Zvipo Zvakavimbiswa Kupa Stylish Nyaradzo iri Zororo
Mwaka wezororo, ruzivo rwekupa zvipo runogona kutaridzika kunge rwakatosiyana asi kuwana chipo chakanakachinechiri chinangwa. Sezvo mamiriro ekunze anotonhora uye vanhu vachigadzirira kudzikira mudzimba dzavo, vatengi vanozove vakachenjera kutsvaga zvinhu zvinopa nyaradzo, kugadzikana uye kugutsikana. Kupa ...
Ndedzipi shangu dzandinofanira kupfeka mundege
Fungidzira chiitiko ichi: uri panhandare yendege, mabhegi akarongedzwa, kukwira ndege yako. Iwe tora chigaro chako, sunga bhandi rako rekugara uye ugare pasi. Mushure mechinguva, tsoka dzako dzinotanga kurwadza nekuti hauna kupfeka shangu dzakakodzera - uye hapana zvakawanda zvaungaite nezvazvo kudzamara wagadzika. Zororo rako riri kupi?
Nyowani Balanc Kuburitswa Makore-Gore Anniversary Sneaker Yemazororo
New Balance naJ. Crew vauya pamwechete kune chimwe chinhu chauchazoda kuwedzera kune yegore rino reKisimusi. Kuchengeta gumi rinoenderera rekushandira pamwe, iwo maratidziro akagadzira sneaker raunogona kupfeka nedikita kana kusendeka mwaka uno wezororo. Iyo Nyowani Balance x J. Crew 997 10th Anniversary sneake ...
Adidas Yeezy Boost 380 'Onyx' masitayera Ari Kuburitsa Svondo Ino
Rutivi rwekupedzisira rweAdhidas Yeezy Boost 380 mu "Onyx" colorway. Pairi yeAdhidas Yeezy Boost 380 colorways iri kurova zvitoro svondo rino. Iyo hofori yemitambo yakasimbisa kuti Kanye West-yakagadzirirwa shangu iri kuburitsa mune yakavanzika "Onyx Reflective" uye "Onyx" iterations iyi F ...
Alibaba's Singles 'Zuva Rinodhonzera mune Zvinopfuura Madhora makumi manomwe emadhora mukutengesa Kusvika Pari zvino
ne admin pane 20-11-12
Iko kutarisa manhamba akagadzirwa naAlibaba yegore raro reSingles 'Zuva rekutenga chiitiko. Alibaba yakaputira zviri pamutemo yegumi nemaviri yegumi neimwe 11.11 Global Shopping Festival, inonyanya kuzivikanwa pasirese seZuva reVanhurume. Kutevera iyo extravaganza yekutenga, iyo e-commerce behemoth announ ...
Jumpman Shoe Nike's Auto-Lacing Tech Yeiyo Iconic Mhepo Jordan 11
Jordan Brand ari kuunza iyo Nike Adapt tekinoroji kune inoyevedza Air Jordan 11. Iyo yemitambo hofori yakaratidza nhasi iyo Air Jordan 11 Adapt, shangu yakashongedzerwa neyakagamuchirwa simba rekukanda tekinoroji kubva kuSwoosh. Kunyangwe iyo tekinoroji iri yazvino, Jordani Brand yakaratidza kuti kuenda isina runyararo kwaive ...
Simpsons uye Vans Vanobatanidzwazve Kusvika Idzva Kisimusi-Yakagadzirwa Sneakers
Rutivi rwekupedzisira rwe "The Simpsons" x Vans Slip-On "Zororo." Vans uye "The Simpsons" vakabatana mauto zvakare, panguva ino kuburitsa nyowani nyowani yekuunganidza iyo vateveri vachazokwanisa kugadzirisa. Skatewear brand uye iyo inomhanya-refu animated komesi inoratidza ...
Aya Ndiwo Akanyanya Kupfuura Zhizha Sneaker Maitiro?
ne admin pane 20-06-05
Kana iwe uchinge wakatarisisa pasi pamateya ako uchishamisika kana baba vako vekare retiki zvichiri chinhu, isu tine mhinduro dzese dzaunoda. Gore rino rinogona kuratidza kutanga kwegumi nyowani, asi neimwe nzira, mamwe emwaka makuru ezhizha masheketi ari kutidzosera munguva. (Danidzira kune ...
Vashandi vekurapa pamitsara yepamberi yecoronavirus vanofanirwa kuve nechokwadi chekushambidza shangu dzavo.
Mune chidzidzo chitsva chakaburitswa mune imwe yeCentre for Disease Control and Prevention's journals, Emerging Infectious Diseases, vaongorori vakaedza mweya nepamusoro pemvura pachipatara. Vatsvaguriri vakaona kuti inenge hafu yevashandi vezvehutano vanoshanda zvakanyanya ...
Iyo Pandemic Economy: Ndeapi vatengi veVatengi Vanotenga Pamhepo Panguva yeCOVID-19?
Iyo Inokurumidza Kukura uye Kuderera E-Commerce Mapato Iyo COVID-19 denda iri kuita zvine mutsindo pane zvese zvikamu zvehupenyu, kusanganisira mashopero anoita vanhu kutenga zvavanoda, uye zvavo zvisiri-izvo-zvidikanwi. Nekutengesa kwepamhepo kutengesa kunofungidzirwa kusvika kune ziso-mvura ...